ट्रम्प पछि हटे, अमेरिकामा अप्रिल अन्त्यसम्म कडाई- विश्व - कान्तिपुर समाचार
इस्टर (अप्रिल १२) पछि सबै ठीकठाक हुने दाबी गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले अप्रिल अन्त्यसम्म सामाजिक दूरी कायम गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
वासिङ्टन — अमेरिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएपछि संघीय सरकारले हिंडडुल तथा सामाजिक क्रियाकलापमा गर्दै आएको कडाईको अवधि बढाएको छ ।
इस्टर (अप्रिल १२) को खुशीयालीसँगै कोभिड–१९ को संक्रमण हट्ने दाबी गरेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकामा कोभिड–१९ का कारण मृत्यु हुनेको संख्या आगामी दुई साता उच्च हुने देखिन्छ ।’
ट्रम्पका अनुसार त्यस अवधिमा संक्रमितको संख्या अस्पतालहरूले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । आइतबार ह्वाइट हाउसमा बोल्दै उनले आगामी जुनसम्ममा अमेरिका पहिलेको अवस्थामा आइसक्ने दाबी गरेका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसका चिकित्सा सल्लाहकार डा. एन्थोनी फौसीले यसअघि नै अमेरिकामा कोभिड–१९ का कारण कम्तीमा २ लाख जनाको मृत्यु हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
अमेरिकामा हालसम्म १ लाख ४० हजार भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन् । जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार २ हजार ४ सय ९३ जनाको ज्यान गएको छ ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ १०:२९
सबै पसल बन्द हुने भएपछि बिहानैदेखि बजारमा मानिसहरुको भीड
चैत्र १७, २०७६ दुर्गालाल केसी
दाङ — घोराही बजारमा सोमबार बेलुकादेखि खाद्यान्न पसलहरु पनि बन्द हुने भएका छन् । यसअघि बिहान ६ देखि ९ बजेसम्म दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलहरु खोल्ने गरिएको थियो ।
घोराही उपमहानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन समितिको आइतबारको बैठकले सोमबार बेलुकादेखि चैत २५ गतेसम्म सबै पसल पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सबै पसल बन्द हुने भएपछि बिहानैदेखि बजारमा मानिसहरुको भिडभाड लागेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु किन्न मानिसहरु बजारमा निस्किए । हरेक पसल र तरकारी बजारमा मानिसहरुबीच दूरी कायम गर्ने सेतो घेराहरु बनाइएको छ । मानिसहरु तोकिएको घेरामा लाइनमा बसेर सामान किनिरहेका छन् ।
अब दैनिक उपभोग्य वस्तु चाहिएमा घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको घोराही उपमहानगरपालिका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा घरघरमै सामान पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
सामान चाहिए उद्योग वाणिज्य संघको फोन नं. ०८२५६००६३ मा सम्पर्क गर्न भनिएको छ । पसल खुल्दा मानिसहरुको भिडभाड हुने क्रम बढेपछि सबै बन्द गर्ने निर्णय गरेको चौधरीले बताए ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७६ १०:१९